2000 Group ( B –9) မှတ်စု (၃၄) by May Aye Oo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » 2000 Group ( B –9) မှတ်စု (၃၄) by May Aye Oo
2000 Group ( B –9) မှတ်စု (၃၄) by May Aye Oo
Posted by Swal Taw Ywet on Apr 19, 2012 in Community & Society, Events/Fundraise |2comments
မှတ်စု (၃၄) by May Aye Oo on Thursday, March 8, 2012 at 8:41am ·
မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သူဟာ ဘယ်သောအခါမှ အထွဋ်အထိပ်သို့ မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာ ငါ့တပည့်တို့ မှတ်ထားကြ..။
မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သက်သာမှုကို သူတပါးအတွက် စွန့်လွှတ် နိုင်ရမယ်..။
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုလည်း သူတပါးတို့အတွက် စွန့်လွှတ် နိုင်ရမယ်..။
ငါကတော့ အသီးတွေ ဝေနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးလို စွမ်းနိုင်သမျှကျင့်မယ်..။
အခမဲ့ဆေးခန်း နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း။
၂ – ၅ မတ်လ၊ ၂၀၁၂
၂ ရက်နေ့မနက်မှာတော့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ Taxi ကလေးဟာ အချိန်မှန်ဘဲ ကျမအိမ်အောက်ကို မနက် ၆ နာရီမှာ ရောက်လာပါတယ်..။ ကျမအိမ် ရလွှာ ပေါ်က ပစ္စည်းတွေချပြီး၊ ကလေးတွေကိုစောင့်ပါတယ်.. လူစုံတဲ့အခါ၊ ပန်းဆိုးတန်း နန်းသီတာ ဆိပ်ကမ်းကိုမောင်းပါတယ်..။ ဒလ ဘက်ကမ်းကို ကူးပြီး ဒလ-ဖျာပုံ ကား (ထက်အောင်ကျော်) ကိုစီးရပါတယ်..။ ဖျာပုံကို မနက် ၁၁ နာရီမှာရောက်ပါတယ်..။ ကားဂိတ်မှာ ဦးဇင်း ဦးစန္ဒိမာ လာကြိုနေပါတယ်..။ မနက်စာကို ဖျာပုံက ဒေါ်ခင်ရွှေ ထမင်းဆိုင်မှာ စားကြပါတယ်..။ ပြီးတော့ ဖျာပုံ-ကျုံကဒွန်း လမ်းအတိုင်း ဆက်သွားကြ ပါတယ်..။
ထုံးစံအတိုင်းဘဲပေါ့ လမ်းကလဲ မကောင်း၊ ဖုံကလဲ ထူထူပေါ့..။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့အတွက်ကတော့ ရိုးနေပါပြီ..။
ကျုံကဒွန်း ကလာကြိုသူတွေက ကားကို ခပ်ဖြေးဖြေးဘဲ မောင်းပါတယ်..။ နောက်တော့မှ သူတို့ပြောပြကြတာက.. လမ်းဆိုးလို့ နောက်ထပ် မလာတော့မှာ စိုးလို့ပါ…တဲ့..။
အဲဒါ ကျမတို့ အကြောင်းကို မသိလို့ပြောကြတာပါ..။ ဒီလမ်းလောက်ကတော့.. ကျမတို့ အဖွဲ့က .. အေးဆေး.. ပါ..။
ကျုံကဒွန်း ကို နေ့လယ် ၂ နာရီ ကျော်လောက်ရောက်သွားပါတယ်..။ ရွာက ရွာကြီးပါ ..။ အိမ်ခြေ ၃၀၀ဝ ကျော်ပါတယ်..။ ကလေးတွေကို ၂၀ဝ လက်ခံတယ်.. ဆိုပေမဲ့.. ကလေးစာရင်းက ၂၀ဝ ကျော်နေပါပြီ..။ နောက်ဆုံးမှာ ကလေး ၂၃ဝ နဲ့ စာရင်းပိတ်လိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီနေ့မှာ ကလေးစာရင်းတွေလုပ်၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် ကဒ်ပြားတွေရေး.. ပေါ့..။
၃ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီ ဆို.. ကလေးတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ရောက်နေကြပါပြီ..။ ကလေးတွေကို register လုပ်၊ ကျောင်းသားကဒ် နဲ့ စာအုပ်တွေပေးပြီး၊ ကျမတို့ရဲ့ ဆရာဝန်က ဆေးစစ်ပေးပါတယ်..။ ဘဲအုပ်က တစ်ရာ၊ နှစ်ရာ .. မဗေဒါက တစ်ပင်ထဲ… ဆိုသလိုဘဲ..၊ ဒီတစ်ခေါက် ခရီးစဉ်မှာ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ထဲပါတာမို့ ကလေး ၂၃ဝ ကို ဆေးစစ်ရတာ အချိန်တော်တော်ကြာသွားပါတယ်..။ ဒါတောင်မှ..သမီးလေး လွင်လွင်မာ က ဝင်ကူပေးပါတယ်..။ ဆေးစစ်တာ မပြီးသေးခင်မှာဘဲ ကလေးတွေက ဗိုက်ဆာနေကြလို့ နိဗ္ဗာန်ဈေးအတွက်ဝယ်ထားတဲ့ good morning Cream Roll တွေ ဝေပေးပြီး ကျွေးလိုက်ပါတယ်..။ ပြီးတော့မှ နိဗ္ဗာန်ဈေး အတွက် မုန့်ကို ဖျာပုံကို မှာပြီး ပြန်ဝယ်လိုက်ပါတယ်..။
ပြီးတော့ ပုသိမ်ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဆီက သရဏဂုံနဲ့ သီလ ယူ၊ ဩဝါဒ ခံကြပြီး၊ သင်တန်းစ ပါတယ်..။
ဒီတစ်ပါတ်သင်တန်းမှာ သင်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကတော့..
ပထမ မင်္ဂလာ (အခြေခံလဲကျ၊ လောကီ၊လောကုတ် ၂ မျိုးလုံးအတွက် အဆုံးအမလဲပါတဲ့ မင်္ဂလ သုတ်ထဲက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံး မင်္ဂလာ – အသေဝနာစ ဗာလာနံ – လူမိုက်နဲ့ မပေါင်းနဲ့ .. ဆိုတာကို .. လူမိုက်ရှောင်နည်း.. နဲ့ တကွ ကလေးတွေရဲ့ ဉာဏ်နဲ့ နားလည်နိုင်သလောက် သင်ပေးခဲ့ပါတယ်..)
သီလတန်ဘိုး.. (ဝါရိတ္တသီလ၊ စာရိတ္တသီလ၊ ကိုယ်စည်းကမ်း၊ နုတ်စည်းကမ်း.. စတာတွေနဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ တက္ကသိုလ် တရားတော် တွေထဲက ယူပြီးသင်ပေးပါတယ်..။)
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး၊
ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အန္တရာယ် .. စတာတွေ သင်ပေးခဲ့တဲ့ အပြင်၊
သီချင်းတွေ ကဗျာတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြား ဗဟုသုတ တွေပါ.. ရနိုင်သလောက်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
ကျုံကဒွန်းရွာမှာ ဒါဟာ ကျမတို့ရဲ့ ပထမဆုံး သင်တန်းပါ..။ ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ သင်တန်းတိုင်းမှာ အခြေခံတွေကို ဘဲ မဖြစ်မနေ ထည့်သင်ပေးပါတယ်..။
သင်တန်းပထမ နေ့ရဲ့ ညနေမှာ ကျမတို့ကို ပင်လယ်ကမ်းစပ်က ကုလားထိပ်ရွာကို စက်လှေနဲ့ လိုက်ပို့ကြပါတယ်..။ ရွာ က ရေတိုက်စားလို့ တစ်ဖြေးဖြေး နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်..။ အုတ်ဂူ တစ်လုံးရေစပ်မှာ ကျန်နေပါတယ်..။ မကြာခင်မှာ .. ရေထဲ ပါသွားတော့မှာ .. လို့ ရွာခံတွေကပြောပါတယ်..။
ကျမက ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အန္တရာယ် .. ကိုသင်ကြားရာမှာ DVD ခွေလဲပြ..၊ Vinyl တွေနဲ့လဲ ပြပြီး.. ဂေဟ စနစ်၊ နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကိုပါ.. အမြဲထည့်ပြောပေးပါတယ်..။ သစ်တောတွေ အမြဲ စိမ်းနိုင်ကြပါစေ..။
သင်တန်းနောက်ဆုံးရက်မှာတော့ ကလေးတွေက သင်ထားတာတွေကို ပြန်ပြီး present လုပ်ပါတယ်..။ ကလေးတွေက တော်ကြပါတယ်..။ တော်တော်များများလဲ catch-up ဖြစ်ပါတယ်..။ သင်တန်းရက်တွေမှာ ခန်းမရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ကလေးငယ်တွေ အများကြီး လာကြည့်ကြ၊ နားထောင်ကြပါတယ်..။ မိဘတွေရောပေါ့..။ အဲဒီ ကလေးလေးတွေကို ပြောင်းဖူးဝယ်ကျွေးတာ ၄၅ ယောက်တောင်ရှိပါတယ်..။ နေ့လယ်ခင်း သင်တန်းဆင်းခါနီးမှာတော့ ပရိတ်သတ်က ပိုများလာပြီး နိဗ္ဗာန်ဈေး အချိန်နီးတော့ လာကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်က ရာချီနေပါပြီ..။ ပျော်စရာလဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်..။ နိဗ္ဗာန်ဈေးမှာ မုန့်တွေရော၊ ပစ္စည်းတွေရော တော်တော်စုံတာမို့ ကလေးတွေရော၊ လူကြီးတွေရော..၊ အလှူရှင်တွေရော.. တော်တော်ပျော်ကြပါတယ်..။
ညနေခင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုလဲ ကလေး ၂၀ဝ ကျော်တက်ကြပါတယ်..။ Dictionary တစ်အုပ်စီဝေပေးပြီး Dictionary ရှာတတ်အောင် သင်ပေး ပါတယ်..။ ပြီးတော့ Dictionaryရှာတာကို အဖွဲ့လိုက်ပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပေးတော့ ကလေးတွေ နိုင်ချင်ဇောနဲ့ အတတ်မြန်သလားမပြောပါနဲ့။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ် သီချင်း၊ ကဗျာလေးတွေလဲသင်ပေး၊ တွေ့ကြ၊ ဆုံကြတဲ့အခါ နုတ်ဆက်တတ်၊ မိတ်ဆက်တတ်အောင် Greetings နဲ့ Introducing ကိုလဲ သင်ပေးပြီး Roll Play လုပ်စေပါတယ်..။ ဆုချတဲ့ ခဲတံ၊ ဘောပင် နဲ့ ချွန်စက်တွေက လှတော့ ကလေးတွေ အရမ်းသဘောကျကြပါတယ်..။ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လို အခေါ်အဝေါ်တွေ သင်ပေးပြီး ကလေးတွေကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ပြိုင်ခိုင်းပါတယ်..။ ဆု ကတော့ Lollipop ပါဘဲ..။ ဒါပေမဲ့ ပျော်ကြတာကတော့ အလွန်..။
ဆရာတော်ကတော့ နောင်နှစ်တွေလဲ သင်တန်းလေးလုပ်ပေးပါအုံးလို့ မိန့်ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ကလေးတွေအတွက် စာကြည့်တိုက်ကလေး တစ်ခု ကျုံကဒွန်းရွာမှာ လုပ်ပေးဖို့လဲ မေတ္တာရပ်ပါတယ်..။ ကလေးတွေကလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ်.. ဆိုလို့ ကျမ ကြိုးစားပေးရအုံးမှာပေါ့…လေ..။
အခမဲ့ဆေးခန်းမှာတော့ အသက်အရွယ်စုံ၊ လူနာစုံ ၃၀ဝ လောက်လာကြ၊ ဆေးကုသပေးခဲ့ပါတယ်..။ ဆရာဝန်က တစ်ယောက်ထဲ ပါတာမို့ ဆေးခန်းက ညဘက်အထိ ဖွင့်ပေးခဲ့ရပါတယ်..။
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီ Link မှာပါ..
ဒီတစ်ပါတ် ခရီးစဉ်ရဲ့ volunteer များကတော့
မောင်ဝေဠုကျော် (ပညာရေးတက္ကသိုလ် – တတိယနှစ်)
မလွင်လွင်မာ (ပညာရေးတက္ကသိုလ် – ဒုတိယနှစ်)
မဟန်နီနိုးနိုး (ပညာရေးတက္ကသိုလ် – ဒုတိယနှစ်) .. နဲ့
သားငယ်လေး စိုင်းသားသား တို့ဖြစ်ပါတယ်..။
အလှူရှင်များ၊ Volunteerများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်..။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများအားလုံးကိုလဲ အမျှပေးပါတယ်..။ အလှူရှင်များ၊ မိသားစုများနဲ့ တစ်ကွ အနန္တစင်္ကြာဝဠာရှိ နတ်၊ လူ၊ သတ္တဝါများ အားလုံး အမျှရကြ၍ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဝမ်းသာကြပါစေ …။
အမျှ ..၊ အမျှ ..၊ အမျှ ..၊
Dear Readers and MG villagers,
You can watch the photos at another post ” 2000 Group ( B – 8 ) “
One of our MG villagers ( Daw May Aye Oo ) and her team ( 2000 Group ) is successfully supporting to the needy people in various area of Myanmar.
They need your helps / supports.
Please try to support 2000 Group as much as you can.
If you have facebook account, Please join to ” 2000.donation.group@gmail.com “.
It is Daw May Aye Oo’s FB.
You can get updated activities of 2000 Group .
I also joined and donated to 2000 Group via MG – Ma Ma Padonma’s posts for 2000 Group .
Thanks you so much for your willing to help the others whom needed.
ပင်လယ်ရပ်ခြားနေသူများ ပြည်တွင်းကို အလှူငွေပို့တဲ့အခါ ဒီ၂၀၀ဝဂရုအသင်းမှာ အသင်းဝင်လုပ် လှူဒါန်းကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်…။ တနှစ်လုံးမှ ကျုပ်ငွေ၂၄၀၀ဝသာ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး မိမိစိတ်ရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ ပရဟိတ အလုပ်များကို ကူညီအားပေးရာရောက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းကို ငွေလွှဲတဲ့အခါ ပိုလွှဲလိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကို သွားယူခိုင်းရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း မင်န်ဘာဝင်ထားပါတယ်။
Dear Brother, ကြောင်ကြီး,
Many thanks for your comment for me and donations / Member for 2000 Group.
Me too, After reading 2000 Group’s activities posted by Ma Ma Padonma at MG,
I joined by face book and take part in.
By MG, I knew about 2000 Group.
By Ma Ma Padonma, I becameamember of 2000 Group.
I would like to spread / distribute good activities of 2000 Group as much as we can.
Because they need your help / support. It is not for them, for the needy people